Ciidanka NISA oo rasaas ku furay Xildhibaanno | KEYDMEDIA ENGLISH
Ciidanka NISA oo rasaas ku furay Xildhibaanno
Sida ay xubno ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo, Madaxweynihii hore, Shariif Sheekh Axmed, u sheegeen Keydmedia Online, ciidanka rasaasta ku furay gaariga, ayaa ka tirsan ilaalada Fahad Yaasiin, kaasoo xilligaas ku sugnaa guriga Qoorqoor.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ilyaas Cali Xasan oo ah Xog-hayaha Xisbiga Himilo Qaran, kana mid ahaa Xildhibaannadii Baarlamaankii 10-aad, ayaa sheegay in ciidan ka tirsan Hay’ada Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, rasaas la dhaceen gaarigiisa.
Wuxuu xusay in ay gaariga saarnaayeen Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka 11-aad, kuwaas oo Alle, ka badbaadiyay rasaasta qoriga Dhashiikaha loo yaqaan, kaasoo lagu furay xilli ay marayeen, agagaarka Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
“Gaarigeyga waxaa Xabadeeyey Ciidanka NISA oo ku sugnaa Hotel Jazeera meel udhow, ma garanaayo sababta loola dhacay Qoriga Dhashiikaha ah oo burburiyey gaariga oo ahaa kuwa aan Xabada karin, waxaa gaariga saarnaa Xildhibaanno”, ayuu yiri Ilyaas.
Xildhibaan hore, Ilyaas Cali Xasan, ayaa muddo mucaarad xooggan ku ahaa nidaanka Farmaajo, waxaana dhawaan laga hor istaagay inuu u tartamo kursigii uu hore ugu fadhiyay, kadib markii Laftagareen u diiday inuu u socdaalo Baydhabo.
Xiisad siyaasadeed oo xooggan, ayaa xalay laga dareemay magaalada Muqdisho, kadib markii Taliyaha Booliska Xijaar, is hor istaag ku sameeyay, howlo baarlamaan, oo uu garwadeyn ka ahaa Guddoomiyaha Ku meel gaarka ah Dhamancad.
Fiidkii hore ee Xalay inta badan jidadka gala, garoonka diyaaradaha ayaa la dhigay ciidan u badan NISA iyo Haramcad, waxaana goobaha qaar, laga soo sheegay taagtag Ciidan, kadib markii Ciidan uu la socday Generaal Indhacadde xoog ku mareen waddooyin ay xirtay NISA.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Farxaan Qaroole, Taliye ku xigeynka Booliska Kaniif iyo Taliyaha KMG ah ee NISA, eedeysane Yaasiin Farey, ayaa qeyb ka ahaa, saraakiisha, xalay fowdada amni ka sameeyay aagga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magalada Muqdisho.